ကြည့်ရှုသူတိုင်း စပါယ်ရှယ်ရင်ခုန်သွားစေ မယ့် သဇင်ဦးရဲ့ ထိမိတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင် – Online News Post
ကြည့်ရှုသူတိုင်း စပါယ်ရှယ်ရင်ခုန်သွားစေ မယ့် သဇင်ဦးရဲ့ ထိမိတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင်
တင်းကိတ် နေ တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး ကတော့ စွဲမက် စရာ ကောင်း တဲ့ ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ ရ င်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထား တဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် မလေး ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ က တော့ ဆွဲဆောင် မှု အပြည့် ရှိ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ နဲ့ အတူ လှပတဲ့ အသား အရေ ကိုပါ ပိုင် ဆိုင် ထားပြီး ဆက် ဆီ ကျတဲ့ သူမရဲ့ မိမိုက် လွန်းနေ တဲ့ ပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ယခုမှာ တော့ သူမ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထား တဲ့ အလန်းစား ဗွီဒီယို လေးကို တင်ပေးလာ တာတွေ့ရ ပါ တယ် ။ သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက် စား ဗွီဒီယိုလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူ များပြား ခဲ့ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေရ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ပရိသတ် ကြီး အတွက် သဇင်ဦးရဲ့ အတွင်း အလှ တွေ ပေါ်နေပြီး ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက် စား ဗွီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
တင္းကိတ္ ေန တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ သဇင္ဦး ကေတာ့ စြဲမက္ စရာ ေကာင္း တဲ့ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ ပုရိသေတြ ရဲ့ ရ င္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူထား တဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ က ေတာ့ ဆြဲေဆာင္ မႈ အျပည့္ ရွိ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း ေတြ နဲ႔ အတူ လွပတဲ့ အသား အေရ ကိုပါ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ ဆီ က်တဲ့ သူမရဲ့ မိမိုက္ လြန္းေန တဲ့ ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ယခုမွာ ေတာ့ သူမ ရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရားေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထား တဲ့ အလန္းစား ဗြီဒီယို ေလးကို တင္ေပးလာ တာေတြ႕ရ ပါ တယ္ ။ သဇင္ဦး ရဲ့ အမိုက္ စား ဗြီဒီယိုေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူ မ်ားျပား ခဲ့ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေနရ တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ သဇင္ဦးရဲ့ အတြင္း အလွ ေတြ ေပၚေနၿပီး ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ က်က် အမိုက္ စား ဗြီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်သလို တကိုယ်လုံးကိုလှုပ်ပြီး အမိုက်စား ဆက်ဆီကကွက်လေးနဲ့ ကပြလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post ပရိတ်သတ်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေမယ့် ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အသဲယားစရာ ဆက်ဆီဗီဒီယို